DHEGEYSO-In kabadan 160 tahriibyaal ah oo lagu qabtay xeebaha Boosaaso. – Radio Daljir
DHEGEYSO-In kabadan 160 tahriibyaal ah oo lagu qabtay xeebaha Boosaaso.
Agoosto 11, 2016 4:22 b 0
Taliska ciidanka booliska gobolka Bari ayaa maanta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxa ay kusoo bandhigeen in kabadan 160 tahriibayaal ah oo isugu jirey rag iyo dumar ay ciidanka ammaanka gobolka Bari dhowaan gacanta kudhigeen.
Dhammaan tahriibayaashaani ayaa ciidanka ammaanka ee gobolka Bari ku qabteen xeebaha gobolka Bari xilli ay doonayeen inay doonyo ka raacaan si ay ugu tahriibaan dalalka Liibiya iyo Khaliijka Carabta gaar ahaan dalka ay colaaduhu kajiraan ee Yemen.
War Murtiyeed laga soo saaray shirkii golaha wasiirada Puntland.